Baba Vavo ndiAbrahamu Here Kana Kuti ndiDhiyabhorosi? | Upenyu hwaJesu
Baba Vavo ndiAbrahamu Here Kana Kuti ndiDhiyabhorosi?
VAJUDHA VANOTI ABRAHAMU NDIYE BABA VAVO
ABRAHAMU ASATI AVAKO, JESU AKANGA AVAKO
Achiri muJerusarema kuMutambo Wematebhenekeri (kana kuti Wematumba), Jesu anoenderera mberi nokudzidzisa chokwadi chinokosha. Vamwe vaJudha varipo vanga vachangobva kumuudza kuti: “Tiri vana vaAbrahamu uye hatina kumbova varanda chero vomunhu upi zvake.” Jesu anovapindura achiti: “Ndinoziva kuti muri vana vaAbrahamu; asi munotsvaka kundiuraya, nokuti shoko rangu harifambiri mberi pakati penyu. Ndinotaura zvinhu zvandakaona kuna Baba vangu; imi, naizvozvo, itai zvinhu zvamakanzwa kuna baba venyu.”—Johani 8:33, 37, 38.
Zviri kutaurwa naJesu zviri pachena: Baba vake vakasiyana nababa vavo. Vasinganzwisisi zviri kutaurwa naJesu, vaJudha vanodzokorora mashoko avo okuti: “Baba vedu ndiAbrahamu.” (Johani 8:39; Isaya 41:8) Abrahamu ndiye tateguru wavo zvechokwadi. Saka vanofunga kuti vane kutenda kwakafanana nekweshamwari yaMwari iyi.
Asi Jesu anopindura zvinovakatyamadza achiti: “Kana muri vana vaAbrahamu, itai mabasa aAbrahamu.” Zvechokwadi kana uri mwana unotevedzera baba vako. Jesu anoenderera mberi achiti: “Asi zvino munotsvaka kundiuraya, munhu akakuudzai chokwadi chandakanzwa kuna Mwari. Abrahamu haana kudaro.” Jesu anozovataurira zvinovatenderedza musoro paanoti: “Munoita mabasa ababa venyu.”—Johani 8:39-41.
VaJudha havasati vabata kuti Jesu ari kutaura nezvaani. Vanozviti vana vakaberekwa zviri pamutemo, vachiti: “Hatina kuberekwa noufeve; tina Baba vamwe chete, iye Mwari.” Asi Mwari ndiye Baba vavo zvechokwadi here? Jesu anoti: “Kudai Mwari aiva Baba venyu, maizondida, nokuti ndakabva kuna Mwari uye ndiri pano. Uyewo handina kungozviuyira ndoga, asi Iyeye akandituma.” Jesu anobvunza mubvunzo obva aupindura: “Nei musingazivi zvandiri kutaura? Nokuti hamugoni kuteerera shoko rangu.”—Johani 8:41-43.
Jesu aedza kuvaratidza kuti kumuramba kwavari kuita kuchavasvitsa kupi. Asi anozoti dyoo paanoti: “Munobva kuna baba venyu Dhiyabhorosi, uye munoda kuita zvinodiwa nababa venyu.” Baba vavo vakaita sei? Jesu anotsanangura zvakajeka achiti: “Iye akanga ari muurayi paakatanga, uye haana kumira zvakasimba muchokwadi, nokuti chokwadi hachisi maari.” Jesu anowedzera kuti: “Uya anobva kuna Mwari anoteerera mashoko aMwari. Ndokusaka musingateereri, nokuti hamubvi kuna Mwari.”—Johani 8:44, 47.
Mashoko iwayo anoshatirisa vaJudha, vobva vamupindura vachiti: “Hatitauri nomazvo here kuti, Iwe uri muSamariya uye une dhimoni?” Pavari kuti Jesu “muSamariya,” vari kuratidza kuti vanomuvenga. Asingaisi pfungwa dzake pafananidzo iyoyo ine chinangwa chokumutuka, Jesu anopindura kuti: “Handina dhimoni, asi ndinokudza Baba vangu, uye imi munondizvidza.” Zvinozotaurwa naJesu zvinoratidza kuti kumuzvidza kwavo inyaya hombe paanotaura mashoko anovashamisa okuti: “Kana munhu akachengeta shoko rangu, haazombooni rufu.” Haasi kureva kuti vaapostora nevamwe vari kumutevera havasi kuzofa. Asi ari kureva kuti havazoparadzwe zvachose ‘parufu rwechipiri,’ rufu rwusina tariro yerumuko.—Johani 8:48-51; Zvakazarurwa 21:8.
Asi vaJudha vanobva vatora mashoko aJesu sezvaari, voti: “Zvino tava kuziva kuti une dhimoni. Abrahamu akafa, uye ndizvo zvakaitawo vaprofita; asi iwe unoti, ‘Kana munhu akachengeta shoko rangu, haazombooni rufu.’ Uri mukuru here kuna baba vedu Abrahamu, vakafa? . . . Unozviti uri ani?”—Johani 8:52, 53.
Zviri pachena kuti Jesu ari kuvaratidza kuti ndiye Mesiya. Asi pane kupindura mubvunzo wavo nenzira inobudisa kuti iye ndiye ani, anoti: “Kana ndikazvikudza, kuzvikudza kwangu hakusi chinhu. Baba vangu ndivo vanondikudza, ivo vamunoti ndiMwari wenyu; asi hamusati mavaziva. Asi ini ndinovaziva. Kana ndikataura kuti handivazivi ndingava murevi wenhema kufanana nemi.”—Johani 8:54, 55.
Jesu anotaura zvekare nezvatateguru wavo ainge akatendeka achiti: “Abrahamu baba venyu vakafara kwazvo vachitarisira kuona zuva rangu, uye vakariona, vakafara.” Abrahamu aitarisira kuuya kwaMesiya nekuti aitenda zvainge zvavimbiswa naMwari. VaJudha vanoramba zvaari kutaura vachiti: “Iwe hausati wava nemakore makumi mashanu, saka wakaona Abrahamu sei?” Jesu anopindura kuti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Abrahamu asati avapo, ini ndaivapo.” Ari kutaura nezveupenyu hwake achiri kudenga sengirozi ine simba asati auya pasi pano.—Johani 8:56-58.
VaJudha vanoshatiriswa nemashoko aJesu okuti iye akararama Abrahamu asati avapo zvokuti vanoda kumutema nematombo. Asi Jesu anobvapo vasina kumukuvadza.
Jesu anoratidza sei kuti Baba vake vakasiyana nababa vevavengi vake?
Nei zvisina kukodzera kuti vaJudha vati Abrahamu ndibaba vavo?
Zvinorevei kuti vateveri vaJesu ‘havazombooni rufu’?
Abrahamu​—“Baba Vevaya Vose Vanotenda”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Baba Vavo ndiAbrahamu Here Kana Kuti ndiDhiyabhorosi?